Kaamirooyinka CCTV. [Sawir Hore] - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeMediaKaamirooyinka CCTV. [Sawir Hore]
Kaamirooyinka CCTV. [Sawir Hore]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa la dilay 10 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maleeshiyo katirsan Galmudug ay beegsadeen dad shacab deegaanka Laan-Qawar ee degmada Jariiban, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Sida ay [...]
Ciidamo katirsan Puntland oo si kooban ula wareegay garoonka diyaaradaha Garoowe oo dib uga baxay
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamo katirsan Puntland oo maanta oo Sabti ah si kooban ula wareegay garoonka diyaaradaha Garoowe ayaa dib uga baxay, sida masuuliyiin katirsan garoonka ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror. Ciidamada oo ka yimid [...]